पारसको गेटअपमा भरतमणि, कमेडी च्याम्पियनमा पुगे सिधै फाइनलमा (भिडियो सहित हेर्नुहोस) - Hamro Najar
प्रकाशित मिति: २०७८ भाद्र १३, आईतबार (१0 महिना अघि)
अनि सुरु हुन्छ मञ्चमा रोमाञ्चक माहोल । लामो कपाल, त्यसमाथि ढाका टोपी, गलामा रुद्राक्षको माला, लामो कमिज लगाएका व्यक्ति अर्थात झलक्क हेर्दा पारस शाहजस्तै देखिने गेटअप … अनि सुरु हुन्छ–उनको उही हाउभाउका साथ प्रस्तुति ।
उनको जवाफ हुन्छ–म किन जाने रु किन जाने ?
पारसको क्यारिकेचर गर्दै भरतमणिले यति भनेपछि दर्शकदिर्घाबाट सुरु हुन्छ, हुटिङ ….
यस्तै उनले बाबुराम भट्टराईलाई पनि छाडेनन्, ‘भेरि रोमान्टिक मोमेन्ट पोलिटिकल । मलाई मनपर्ने पुरुष नेता पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई । ताक परे अब राप्रपामा आउन सक्छ, पार्टी फेरिरहन्छ । यत्रो क्रान्ति गरेर पनि फार्टी फेरिराछ ल।। १ अस्तिअस्ति उ त्यो सन्तोष थापालाई भोट मागिराथ्यो…..’
गोकुल बाँस्कोटासहित थुप्रै क्यारिकेचर गरेर चर्चामा छाएका थिए । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रस्तुति राख्दै दर्शक तथा निर्णायकको प्रिय बन्न सफल पौडेल उपाधिका दावेदार मानिन्छन् ।ratopati
#Comedy champion season 2